🥇 ▷ Cusboonaysiinta Xperia S ilaa Android CM9 4.0.4 ICS Firmware Final [How To install] ✅
Cusboonaysiinta Xperia S ilaa Android CM9 4.0.4 ICS Firmware Final [How To install]
Ilaa iyo hadda kama aanan wada hadal taleefanno badan oo Sony ah, laakiin hadda waan ka wada hadli doonnaa. Sony Xperia S hadda waa aaladda koowaad ee Sony oo qiyaas waxa, sidoo kale waa mid ka mid ah taleefannadii ugu horreeyay ee Android ee lagu helo Android CM9 4.0.4 Ultimate ICS. Xperia S hadda waa la cusboonaysiin karaa Android ICS CM9 4.0.4 qalab firmware ah oo hadda diyaar u ah soo degsashada.
Casharradan, waxaan kuu sheegi doonaa sida loo rakibo caado Android ICS CM9 4.0.4 ROM oo ku saabsan Sony Xperia S oo leh tillaabooyin iyo tilmaamo dhammaystiran oo ku saabsan sidii loo kaydsan lahaa taleefankaaga gacanta. Qalabkaaga Xperia S waa in la ruqseeyo oo soo kabashada ClockworkMod waa in lagu dhejiyaa. Aan ku bilowno tababarka hadda.
Horudhac: Dhammaan aaladaha, wax ka badalida ama ROM-yada aan soo sheegnay waa hantida milkiileyaasheeda / horumariyeyaasha. Annaga (TeamAndroid.com) ama horumariyaha mas’uul kama nihin haddii aad waxyeello ama waxyeelo u geysato qalabkaaga. Kuuma weydiisanay inaad isku daydid casharkan waxbaridda ah ????
Hubso inaad ku rakibtay dhammaan wadayaasha USB-gaaga Samsung Xperia S si aad uguxiriso kumbuyuutarka. Soo dejiso Samsung Xperia S! Marka laga soo tago darawalka USB-ga, waxaa jira waxyaabo badan oo maskaxda lagu hayo.
1. Waa inaad karti u siisaa habka USB wax maqdinta. Tani waxay ka caawineysaa isku xirka taleefankaaga Android kombiyuutarka. Halkan ka eeg: Sida loo xoojiyo dib-u-habeynta USB.
2. Baterigaaga moobaylka waa in lagu soo dallaco 80-85%. Haddii taleefankaaga gacantu si lama filaan ah ugu dhinto batari, inta lagu gudajiro ROM ama rakibaadda wax ka badal iyo cusbooneysiin, taleefanka gacantu wuxuu u dhiman karaa si joogto ah. Halkan ka fiiri: Sida loo hubiyo boqolkiiba baatariga.
3. Kaydso dhammaan xogta muhiimka ah ee aad u baahan karto isla markaaba cusboonaysiinta ROM cusub, ama kaydso kayd haddii ay dhacdo, waligaa ma ogaan kartid khalad dhacay. Hoos ka fiiri sida loo kaydinayo xogtaada:
4. Taleefankaaga gacantu waa inuu ahaadaa mid xidhan. Tilmaamo dheeri ah oo loogu talagalay aaladaha Android ee qufulan ayaa lagu dari doonaa casharka si loo furo qalabka.
Hadda, aan ku sii wadno tababarka ku yaal bogga ku xiga oo aan cusboonaysiinno Xperia S illaa CM9 Android 4.0.4 ICS Custom ROM.